Ukuzikhohlisa: Izindlela ezihamba phambili zokugwema noma zokulungisa idatha yamakhasimende eyimpinda | Martech Zone
NgoMsombuluko, Ephreli 26, 2021 NgoMsombuluko, Ephreli 26, 2021 UZara Ziad
Idatha eyimpinda ayinciphisi nje kuphela ukunemba kwemininingwane yebhizinisi, kepha iphazamisa nekhwalithi nakho kwakho kwamakhasimende. Yize imiphumela yedatha eyimpinda ibhekene nawo wonke umuntu - abaphathi be-IT, abasebenzisi bebhizinisi, abahlaziyi bemininingwane - inomthelela omubi kakhulu ekusebenzeni kokumaketha kwenkampani. Njengoba abathengisi bemele umkhiqizo nokunikezwa kwensizakalo kwenkampani embonini, idatha engalungile ingasheshe ilonakalise igama lomkhiqizo wakho futhi iholele ekulethweni okuhlangenwe nakho okungalungile kwamakhasimende. Idatha eyimpinda ku-CRM yenkampani yenzeka ngenxa yezizathu ezahlukahlukene.
Kusuka ephutheni lomuntu kumakhasimende ahlinzeka ngemininingwane ehluke kancane ezindaweni ezihlukene ngesikhathi ku-database yenhlangano. Isibonelo, umthengi ubhala igama lakhe njengoJonathan Smith kwelinye ifomu noJon Smith kolunye. Inselelo ibhebhethekiswa i-database ekhulayo. Imvamisa kuya ngokuya kube nzima kubaphathi ukugcina umkhondo we-DB kanye nokulandela imininingwane efanelekile. Kuba inselele enkulu ukuqinisekisa ukuthi i-DB yenhlangano ihlala inembile ”.
Natik Ameen, Isazi Sezokumaketha ku Canz Marketing
Kulesi sihloko, sizobheka izinhlobo ezahlukahlukene zedatha eyimpinda, namanye amasu awusizo abathengisi abangawasebenzisa ukuthola imininingwane yolwazi yenkampani yabo.
Izinhlobo Ezihlukile Zedatha Eyimpinda
Idatha eyimpinda ivame ukuchazwa njengekhophi yoqobo. Kepha kunezinhlobo ezahlukahlukene zedatha eyimpinda engeza ubunzima kule nkinga.
Izimpinda eziqondile emthonjeni ofanayo - Lokhu kwenzeka lapho amarekhodi avela komunye umthombo wedatha edluliselwa komunye umthombo wedatha ngaphandle kokubheka noma yimaphi amasu afanayo noma wokuhlanganisa. Isibonelo kungaba ukukopisha imininingwane kusuka ku-CRM kuya kuthuluzi lokuthengisa le-imeyili. Uma ikhasimende lakho libhalisele incwadi yakho yezindaba, khona-ke irekhodi labo selivele likhona kuthuluzi lokumaketha le-imeyili, futhi ukudlulisa imininingwane kusuka ku-CRM kuya kuthuluzi kuzokwakha amakhophi ayimpinda ebhizinisi elifanayo.
Izimpinda eziqondile emithonjeni eminingi - Izimpinda eziqondile emithonjeni eminingi zivame ukuvela ngenxa yezinhlelo zokulondoloza idatha enkampanini. Izinhlangano zivame ukumelana nemisebenzi yokuhlanzwa kwedatha, futhi zithambekele ekugcineni wonke amakhophi emininingwane ezinayo. Lokhu kuholela emithonjeni ehlukene equkethe imininingwane eyimpinda.
Ukuguquguqula izimpinda emithonjeni eminingi - Izimpinda zingaba khona ngokuhlukahluka kwemininingwane futhi. Lokhu kuvame ukwenzeka lapho amaklayenti enza ushintsho egameni lokugcina, isihloko somsebenzi, inkampani, ikheli le-imeyili, njll. Futhi njengoba kunomehluko ophawulekayo phakathi kwamarekhodi amadala namasha, imininingwane engenayo iphathwa njengenhlangano entsha.
Izimpinda ezingezona ngqo emithonjeni efanayo noma eminingi - Impinda engeyona ngqo kulapho inani ledatha lisho into efanayo, kepha limelelwa ngezindlela ezahlukahlukene. Isibonelo, igama elithi Dona Jane Ruth lingasindiswa njengoDona J. Ruth noma uDJ Ruth. Onke amanani wedatha amele into efanayo kepha uma eqhathaniswa ngokusebenzisa amasu alula wokufanisa idatha, athathwa njengokufana.
Ukuzenzela kungaba inqubo eyinkimbinkimbi kakhulu njengoba abathengi namabhizinisi bavame ukuguqula idatha yabo yokuxhumana ngokuhamba kwesikhathi. Kunokwehluka ekutheni bangena kanjani yonke imikhakha yedatha - kusuka egameni labo, amakheli e-imeyili, ikheli lokuhlala, ikheli lebhizinisi, njll.
Nalu uhlu lwezinto ezi-5 ezinhle kakhulu zokususa idatha abathengisi abangaqala ukuzisebenzisa namuhla.
Isu 1: Yiba Nokuhlolwa Kokuqinisekisa Ekungeneni Kwedatha
Kufanele ube nezilawuli eziqinile zokuqinisekisa kuwo wonke amasayithi wokufaka idatha. Lokhu kufaka phakathi ukuqinisekisa ukuthi idatha yokufaka ihambisana nohlobo lwedatha oludingekayo, ifomethi, kanye namanga phakathi kwamabanga amukelekayo. Lokhu kungasiza kakhulu ekwenzeni idatha yakho iphelele, isebenze, futhi ibe nenembile. Ngaphezu kwalokho, kubalulekile ukuthi ukuhamba kwakho kokungena kwedatha kungalungiselelwe ukudala amarekhodi amasha kepha kuqala ukusesha futhi kutholakale ukuthi ngabe idathasethi inerekhodi elikhona vele elifana nelingenayo. Futhi ezimweni ezinjalo, ithola kuphela futhi ivuselele, kunokudala irekhodi elisha. Izinkampani eziningi zifake amasheke ukuze ikhasimende lixazulule imininingwane yalo eyimpinda.
Isu 2: Yenza Ukuziqamba usebenzisa amathuluzi azenzakalelayo
Sebenzisa insiza yokuzenzela isoftware yokususa idatha lokho kungakusiza ngokuhlonza nokuhlanza amarekhodi aphindwe kabili. Lawa mathuluzi angakwazi vamisa idatha, bathole ngokunembile ukufana okuqondile nokungafani ngqo, futhi banciphisa nomsebenzi wezandla wokubheka izinkulungwane zemigqa yedatha. Qiniseka ukuthi ithuluzi linikeza ukusekelwa kokungenisa idatha kusuka kwimithombo ehlukahlukene enjengamashidi we-excel, i-CRM database, uhlu, njll.
Isu 3: Sebenzisa Amasu Okucwaninga Okucacisiwe Kwedatha
Ngokuya ngohlobo lwedatha, ukukhishwa kwedatha kwenziwa ngokuhlukile. Abakhangisi kufanele baqaphele ngenkathi bededela idatha ngoba into efanayo ingasho okuhlukile kuzimpawu ezahlukahlukene zedatha. Isibonelo, uma amarekhodi amabili wedatha ehambelana kukheli le-imeyili, khona-ke kunamathuba aphezulu okuthi ayizimpinda. Kepha uma amarekhodi amabili ehambisana nekheli, kusho ukuthi akuyona impinda, ngoba abantu ababili bendlu eyodwa bangaba nokubhaliselwe okuhlukile enkampanini yakho. Ngakho-ke qiniseka ukusebenzisa ukwenziwa kwedatha, ukuhlanganisa, nokuhlanza imisebenzi ngokuya ngohlobo lwedatha oluqukethe imininingwane yakho.
Isu 4: Finyelela iRekhodi Elikhulu Legolide Ngokunothisa Idatha
Lapho usuthole uhlu lwemeshi ekhona ku-database yakho, kubalulekile ukuthi uhlaziye lolu lwazi ngaphambi kokuthi kwenziwe izinqumo zokuhlanganisa noma zokuhlanza idatha. Uma amarekhodi amaningi akhona ebhizinisini elilodwa futhi amanye amelela imininingwane engalungile, ngakho-ke kungcono ukuwasula lawo marekhodi. Ngakolunye uhlangothi, uma izimpinda zingaphelele, ukuhlanganiswa kwedatha kungukukhetha okungcono ngoba kuzokwenza ukuthi kuthuthukiswe idatha, futhi amarekhodi ahlanganisiwe angangeza inani elengeziwe ebhizinisini lakho.
Kunoma ikuphi, abathengisi kufanele basebenze ukuthola umbono owodwa wolwazi lwabo lokumaketha, olubizwa nge- irekhodi eliyinhloko legolide.
Isu 5: Gada Izinkomba Zekhwalithi Yedatha
Umzamo oqhubekayo wokugcina idatha yakho ihlanzekile futhi idayisiwe kuyindlela engcono kakhulu yokwenza isu lakho lokukhishwa kwedatha. Ithuluzi elinikeza imininingwane yokulawulwa kwedatha nezici zokuphatha ikhwalithi lingasiza kakhulu lapha. Kubalulekile ukuthi abathengisi babheke ukuthi idatha enembile, evumelekile, ephelele, ehlukile, futhi engaguquguquki esetshenziselwa imisebenzi yokuthengisa.
Njengoba izinhlangano ziqhubeka nokufaka izicelo zedatha ezinkambisweni zebhizinisi labo, kuye kwadingeka ukuthi wonke umakethi abe namasu okususa idatha. Isinyathelo sokusebenzisa amathuluzi wokususa idatha, nokuklama ukugeleza kokusebenza okungcono kokwenza nokubuyekeza amarekhodi wedatha amanye amasu abalulekile angavumela ikhwalithi yedatha ethembekile enhlanganweni yakho.
Mayelana neLadder Ladder
IDatha Ladder yipulatifomu yokuphathwa kwekhwalithi yedatha esiza izinkampani ekuhlanzeni, ekuhlukaniseni, ekulinganiseni, ekuphindaphindeni, ekuphrofayeleni nasekucebiseni idatha yazo. Isoftware yethu ehola phambili embonini ikusiza ekutholeni amarekhodi afanayo, uhlanganise idatha, futhi ususe izimpinda usebenzisa ukuqondanisa okuhlakaniphile okungaqondakali nokufunda ngomshini, ngaphandle kokuthi idatha yakho ihlala kuphi nokuthi ifomethi yiphi.
Landa Isilingo Samahhala Sesoftware Yokufanisa Idatha
Tags: ukwenziwa kwamakheliaiukuhlakanipha okungekhona okwangempelaangamakethaidatha yekhasimendeUkuhlukaniswa kwedathaukuhlanzwa kwedathaukunothisa idathaileli yedathaukufana kwedathaukufakwa kwedathaukumiswa kwedathaukuzinikelaukuzikhohlisaphinda idatha yamakhasimendeukufana okungaqondakaliukufunda imishininatik ameen
UZara Ziad ungumhlaziyi wokumaketha komkhiqizo eDatha Ladder onemvelaphi ye-IT. Unentshisekelo yokwakha isu lokuqukethwe lokuqhakambisa eliqokomisa izingqinamba zenhlanzeko yedatha yangempela ebhekene nezinhlangano eziningi namuhla. Ukhiqiza okuqukethwe ukuxhumana nezixazululo, amathiphu, kanye nemikhuba engasiza amabhizinisi ukusebenzisa nokufeza ikhwalithi yedatha yemvelo ezinqubweni zabo zobuhlakani bebhizinisi. Uzama ukudala okuqukethwe okubhekiswe ezinhlwini eziningi zezithameli, kusuka kubasebenzi bezobuchwepheshe kuya kwabasebenzisi bokugcina, kanye nokukumaketha kuzingxenyekazi ezahlukahlukene zedijithali.